Poise Oriọna Tebụl A Na-Agbanwe Agbanwe - Imewe Mmewe
Oriọna Tebụl A Na-Agbanwe Agbanwe
Oriọna Tebụl A Na-Agbanwe Agbanwe Ọdịdị acrebatic nke Poise, oriọna tebụl nke Robert Dabi nke Unform.Studio na-agbanwe n'etiti ọpụrụiche ma nwekwaa ọnọdụ ukwu ma ọ bụ obere. Dabere n'ọkwa dị n'etiti mgbanaka a na-enye ìhè na ogwe aka na-ejide ya, eriri ma ọ bụ tangent ga-adị gburugburu. Mgbe etinyere na shelf dị elu, mgbanaka ahụ nwere ike ikpuchi shelf; ma ọ bụ site na itinye mgbaaka, ọ nwere ike imetụ mgbidi gbara ya gburugburu aka. Ebumnuche nke mmezigharị a bụ ime ka onye nwe ya kee ma jiri ọkụ dị na-egwu ya na ihe ndị ọzọ gbara ya gburugburu.
Aha oru ngo : Poise, Aha ndị na-emepụta ya : Dabi Robert, Aha onye ahịa : unform.
Oriọna Tebụl A Na-Agbanwe Agbanwe Dabi Robert Poise